Google waxay rabtay inay sidoo kale noqoto madal ciyaarta loogu talagalay Mac | Waxaan ka imid mac
Google wuxuu rabay inuu sidoo kale u noqdo madal ciyaarta Mac
Manuel Alonso | | Noticias, Xanta
In kasta oo aan wax badan laga sheegin, tijaabada Apple ee ka dhanka ah Ciyaaraha Epic ayaa sii socota xoog ilaa xoog. Dhab ahaantii, warkani wuxuu ka yimaadaa dukumentiyada lagu bixiyey tijaabadaas. Daahfuray Verge, warbixintaasi waxay tilmaamaysaa qorshe shan sano ah oo lagu abuurayo hal madal oo hal-abuurayaasha cayaaruhu ku beegsan karaan ciyaartooyda shaashad kasta, oo ay ku jiraan Mac.
Sida ku cad dukumintiga cinwaankiisu yahay "Ciyaaraha Mustaqbalka", madalku wuxuu ku salaysnaan doonaa adeegyada Google iyo "xakameeyaha ciyaarta gacanta ee caalamiga ah ee jaban" oo la jaan qaadi kara aalad kasta. Adeeggu wuxuu u rogi lahaa “aaladda oo dhan” konsole wuxuuna furi doonaa “gelinta shaashadda” isaga oo ka faa’ideysanaya taageerada xakamaynta ee TV-yada caqliga leh iyo bandhigyada.
Sidoo kale, waxay u muuqataa in adeeggu ku salaysnaan doono adeegyada socodka. Dukumentiga ayaa sheegaya in ay "u gudbin doonto hantida sirdoonka si loogu ciyaaro isla markaana ciyaarta loogu habeeyo awooda aaladda."
Macs had iyo jeer waxaa loola dhaqmaa sidii aalad u dhow null-ka ciyaaraha. Qof kasta oo ciyaaray ciyaaraha fiidiyowga kombiyuutarka ayaa ogaan doona taas lahaanshaha Mac ma aha fikrad wanaagsan. Laakiin waxaa jiray dhinacyo gaar ah oo ka mid ah qorshaha "Ciyaaraha Mustaqbalka" ee Google oo laga yaabo inay u dhowdahay xaqiiqda. Horraantii 2021, Microsoft ayaa ku dhawaaqday in Windows 11 adeegsadayaashu ay awoodi doonaan inay barnaamijyada Android ka maamulaan Appstore -ka Amazon.
Dabcan, qorshayaasha ciyaarta iyo hammiga Google ayaa laga yaabaa inay is beddeleen tan iyo markii dukumintiga la qoray. Horraantii 2021, tusaale ahaan, Google waxay xirtay Studio -ga Ciyaaraha ee Stadia. Sidaas darteed ma naqaanno haddii aan ku milmi karno dukumiintiga shatiga. Taasi dhammaadkeeduna wuxuu noqon karaa uun fikrad oo waligaa ha arkin iftiinka xaqiiqda. In kasta oo ay aad u fiicnaan lahayd in la arko sida mashruucani noqon doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Google wuxuu rabay inuu sidoo kale u noqdo madal ciyaarta Mac
Waxaad hadda isku dayi kartaa beta -ga dadweynaha ee WhatsApp Desktop -kaaga Mac -kaaga
Muranka nidaamka ogaanshaha sawir -gacmeedka qaawan ee Apple ayaa sii socda